🥇 ▷ Filimka LEGO, ciyaarta rasmiga ah ee iPhone iyo iPad ayaa soo socota ✅
Filimka LEGO, ciyaarta rasmiga ah ee iPhone iyo iPad ayaa soo socota
Ciyaarta fiidiyowga ee LEGO Movie Game, ciyaarta LEGO filimku hadda waa ciyaar loogu talagalay aaladda iOS
Haddii aad jeceshahay filimka LEGO, hadda waad ku raaxeysan kartaa ciyaarta rasmiga ah Ciyaarta “LEGO Movie Video Game” ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo iPod taabashada, kaas oo laga heli karo App Store. Waa ciyaar ficil buuxda leh oo aad ku raaxeysan karto inka badan 90 xaraf oo kaladuwan oo filimka ku jira. Ha moogaan dhamaan astaamaha ciyaartaan waxaadna kala soo bixi hoos.
Waa maxay ciyaarta rasmiga ah ee filimka LEGO?
Ciyaarta rasmiga ah ee Filimka LEGO: Ciyaarta fiidiyaha ee loogu talagalay iPhone iyo iPad Waad u beddeli kartaa kan caadiga ah si aan caadi ahayn oo waxaad ku raaxeysan kartaa waayo-aragnimo weyn oo wax dhisid ah oo ay bixisay LEGO.
Ciyaartan xiisaha leh waxaad u baahan tahay inaad gasho dunida Emmet, muwaadin celcelis ah, gebi ahaanba caadi ah, oo xeerarka dhow dhow ah, laakiin yaa lagu jahwareeri doonaa mid ka mid ah dadka aan caadiga ahayn adduunka iyo fure u ah badbaadinta adduunka. . Ciyaartoydu waa inay kugu hagaan hami hal abuur leh si aad u joojiso daacada xun, safarkaasoo Emmet aan diyaarsaneyn. Ma tahay
Waxaa ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee ciyaarta filimka LEGO ee aan muujin karno:
In kabadan 90 jilaa oo kala duwan ayaa ka soo muuqanaya filimka, oo ay ku jiraan Batman, Superman, Green Ninja, Gandalf, Benny iyo kuwa kaloo badan.
Ku safro adduunyo cajiib ah sida Ladriburg, Cuckoo Cloud iyo qaar kaloo badan oo ah 45 heerar xiiso leh.
Ku dheji dabaqyo badan ka badan abid jawiga xiisaha leh ee laga sameeyay LEGO blocks.
Ururi oo isticmaal boggaga tilmaamaha ee LEGO si aad ugu dhisto qaab cusub.
U adeegso awoodda cajiibka ah ee kuwa wax dhisaya ee Masterka si aad u dhisaan hal abuurka aan caadiga ahayn ee LEGO.
Ku raaxayso waayo-aragnimo LEGO oo dhab ah sida lagu arkay filimka, oo leh qaab cusub oo muuqaal ah oo dhaqdhaqaaq muuqaal ah kaas oo dhaqdhaqaaqa qalabka carruurtu ku ciyaaraan ee loo yaqaan ‘LEGO toys’ loo qoonsado qaab dhab ah.
Aad ayey muhiim u tahay in la ogaado in codsigan uu ku jiro ikhtiyaarro isku dhafan oo la iibsan karo oo lagu iibsan karo lacag dhab ah oo ka soo bixi doonta xisaabtaada iTunes. Xusuusnow in iibsiyadan isku-dhafan lagu dhex dhejin karo ama lagu dhaqaajin karo iyada oo loo marayo aaladda aaladdaada.
Ku soo degso filimka La LEGO Movie for iPhone, iPad iyo iPod taabashada
Haddii aadan wali haysan barnaamijka LEGO filimkaaga iPhone iyo iPad-ka, waxaad ku rakibi kartaa khadka tooska ah ee ka soo degsiga, ka App Store, kaas oo aad ka heli doontid hoosta.
Ciyaarta fiidiyowga ee LEGO Movie Video Game ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 7.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadda: Ingiriisiga.